Somali News 06.10.21 | KWIT
Laga bilaabo maanta, Waaxda Booliska Magaalada Sioux, Woodbury County Sheriff’s Office, iyo Iowa State Patrol ayaa kordhinaya roondooyinka loogu talagalay darawalada naafada ah. Fulinta waxaa loo qorsheeyay inay socoto hal toddobaad. Gudi hawleed ayaa laga soo saaray sanadkan Iowa si ay isugu dayaan oo ay u gaaraan hadaf ka yar 300 dhimashada taraafikada hal sano gudaheed.
Baahida Iowans ee tallaalka coronavirus ayaa hoos u dhacday illaa heer laga yaabo in gobolka laga tuuro 33,000 qiyaasood oo tallaal ah. Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa toddobaadkan xaqiijisay in qiyaasta tallaalka Johnson & Johnson ay dhici karto haddii Iowans aysan go'aansan inay aqbalaan.
Qiyaasaha ayaa u muuqday inay heleen dib u dhigis maanta markii Johnson & Johnson ay ku dhawaaqeen nidaamiyeyaasha federaalka inay u oggolaanayaan shirkadda inay ku kordhiso taariikhda dhicitaanka lix toddobaad. Si kastaba ha noqotee, haddii aan la isticmaalin dhammaadka Luulyo, qiyaaso badan oo ka mid ah ayaa wali sii wadi kara in la tuuro.